आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित पर्नु हुन्छ ! - jagritikhabar.com
अमेरिकी किसानहरुले यसरी निकै डरलाग्दो गरी गाईको पेटमा प्वाल पार्ने गर्दछन । किन यसरी पसुलई दुख दिएका होलान यी अमेरिकनले भनेर बुझ्दै जाँदा यो त नयाँ र अचम्मको प्रविधि पो रहेछ ।
यसो गर्नुको कारण पनि बडो आस्चर्यलाग्दो नै छ। यो अनौठो र डरलाग्दो जिउँदो गाइकै पेटमा ठुलै प्वाल पर्नुको कारण गाईको आयु बढाउन र स्वास्थ्य जाँच गर्न सहज पर्न रहेछ ।
पशुबिज्ञ र वैज्ञानिकहरुका लागि गाईको स्वास्थ्य र भित्री भागको जाँच गर्न कठिन हुने हुँदा यो प्रविधि अपनाएर सहज पर्न यस्तो गरिएको रैछ। गाईको पेटमा यसरी प्वाल पारिसकेपछि एउटा पलास्टिकको रिङले यसलाई बन्द गरिन्छ । यो प्रक्रियाको मद्दतले वैज्ञानिकहरुले गाईको पाचन प्रक्रियाको बारेमा धेरै जानकारी सहज रुपमै प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यसले मुख्यगरी गाईका लागि कुन खाना सबैभन्दा फाइदाजनक हुन्छ र पेटमा के-कस्ता ब्याक्टेरियाहरु छन् भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । गाईको शरीरमा यस्ता प्वाल जुन भागमा बनाइएको हुन्छ त्यसलाई रुमेन भनिन्छ ।
हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छौ । किनकी कुनै चिजहरु स्कसाथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ । तर यस्ता चिज पनि हुन्छ जुन एक आपसमा मिसाएर खानुहुदैन । मिसाएर खाएमा स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या देखा पर्छ।
आज हामी तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सँगै खानु हुँदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन।
यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट गडबड हुन्छ। यस दहीले चिसो हुन्छ, त्यसैले यसलाई तातो कुनै पनि चीजको साथ खान हुँदैन।
जस्तै धेरै मानिसहरू दहीसँग माछा खान्छन् तर त्यसो गर्नु हुँदैन किनभने माछाले तातो बनाउछ । आयुर्वेदका अनुसार कुखुरा र खजूर कहिले पनि सँगै खान हुँदैन, यो हानिकारक पनि हुन सक्छ।
अब दूधको बारेमा कुरा गरौं। जस्तो तपाईंलाई थाहा होला दूध एक जनावरको प्रोटीन हो, फ्राइड गरिएको, त्यसैले भुटेको खाना खानाले यसले प्रतिक्रिया देखाउन सक्छ ।
धेरै व्यक्तिहरू दूध चियामा नुन हालेर खाँन्छन् तर मँ तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन। दुधमा नुन मिल्नाले मिल्क प्रोटिन जम्दछ । र पोषणमा तत्वमा कमी आउँछ ।
दुधको साथमा फलफुल खानुहुँदैन । त्यसो गर्दा दुधमा रहेको क्याल्शियमले फलहरूको एन्जाइम सोस्दछ र यस कारणले शरीरले फलहरूबाठ प्राप्त हुने पोषण तत्व प्राप्त गर्न सक्दैन।
यस बाहेक दाल, हरियो तरकारी, मूला र अण्डा, मासु र पनीर जुन चीज खाए पनी दूध पिउनु हुँदैन। यसले तपाईंको पाचन शक्तिलाई कमजोर पार्न सक्छ। जहिले पनि दिमागमा राख्नुहोस् कि महलाई तातो बनाएर पनि मह खानु हुँदैन। एकै साथ मह ,नौनी घी र मह खानु हुँदैन।
धेरै मानिसहरूलाई उमालेको अण्डामा निचोड्ने लेबो खाने मन पर्छ, तर म तपाईंलाई भन्छु कि यो कहिले पनि हुँदैन। त्यसो गर्नाले स्वास्थ्यलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ। र त्यहाँ हृदयघातको जोखिम पनि हुन सक्छ।